OsoteMapi | OsoteMapping ™ - Na-atụ anya, vnyagharịa & Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ
NextMapping™ - Chere, Chọgharịa & Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ
AKW NEWKWỌ ọhụrụ “OsoteMapping ™ - Na-atụ anya, vnyagharịa na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ ”Ugbu a wepụtara ma dị na Amazon.
OsoteMapping ™ - Na-atụ anya, vnyagharịa na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ
NextMapping ™ na - enyeputa akụrụngwa na usoro nke ga - eme ka gị na ndị otu gị nwee ike ịme ka ọdịnihu nke ọrụ jiri ụbawanye ike, ike na mmeghari rụọ ọrụ. Site n’inyocha ihe omimi banyere ọdịnihu ọrụ, njiri mara nke ọma banyere ihe ịga nke ọma ndị ahịa na afọ iri abụọ nke ịbụ otu n’ime azụmaahịa kacha elu n’ụwa ‘gaa’ ndị na-ahụ maka ndụmọdụ Cheryl Cran na-enye ihe nzuzo iji gbanwee mgbanwe ndị na-akpata ọgba aghara n’ime ohere na uru. NextMapping ™ bu ezigbo ihe nlere anya nke na egosiputa usoro iji nyere gi aka inyocha onodu n’uwa n’iru n’ime uwa anaghi akwụsi ike. Site na iji usoro NextMapping ™, ị ga-amụta otu esi atụ anya ngwa ngwa, ịnyagharị na ịmepụta ọdịnihu ọrụ ga-abụ maka onwe gị, ndị otu gị na ụlọ ọrụ gị nke na-eduga na nnukwu asọmpi.
Ndị na-agụ akwụkwọ ga-amụta:
Ihe a na –eme oge oru banyere oru ya bu akparamagwa ndi mmadu na nka na uzu
Ihe atọ a ịchọrọ iji dịrị na ọdịnihu ugbu a ma bụrụkwa na ọ ga-agbanwe
Otu esi agụ ihe ịrịba ama nke mgbanwe iji tụọ anya ma nwee ike n’ihu ike ndị na-akpata ọgba aghara
Otu esi eji NextMapping™ nlereanya ịmepụta ọdịbendị na ụlọ ọrụ dị njikere n'ọdịnihu
Detuo ma chekwaa usoro dị mkpirikpi na nke etiti n'ime ohere nke mmepe
Otu esi agba ndị ọzọ ume ịhazi ihe ọdịnihu na 'iduzi mgbanwe' iji ruo ebe ahụ
Okwesiri- Gwa Onye O bula Na-aru oru Ma obu Iburu Onye Oma Ahia
Enwere m ohere ịnụ Cheryl Cran n'otu n'ime okwu nkuzi ya n'afọ gara aga, akwụkwọ a bụ ihe kachasị mma maka onye ọ bụla nwere mmasị n'ọdịniihu ọrụ na ngbanwe nke ụwa ọrụ taa rue ụwa nke echi, taa. Akwụkwọ a kwesịrị ka ndị ọrụ niile na ndị isi azụmaahịa na ọkwa niile gụọ ma tụlee ya, iji ghọta ihe na-akpali omenaala ndị ọhụrụ na-arụ ọrụ (puku afọ iri na Get-Z) yana otu agbụrụ ọdịnala nwere ike isi jikọọ ma gbanwe ọdịbendị ndị ahụ na-abịanụ maka mmezu nkịtị. maka ọdịnihu nke ọrụ. A ga-atụle akwụkwọ ahụ na kọleji, na Taa Gosi, ebe ọ bụla na-atụle olileanya na ọganihu maka ọrụ n'ọdịnihu. Ihe omuma nke Cheryl na njedebe nke isi nke akwukwo a bu ugwo nke nnabata, nani. Nkà na ụzụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na akparamàgwà mmadụ na-agwakọta nnọọ nkọwa ya nke na-eme ka e nwee ezi mmụta na nke bara uru. ”
- Chester M. Lee, Ahịa Amazon
Ọdịnihu nke ọrụ, njikwa onwe ya na nhazi nọ ebe a!
“Akwụkwọ kachasị mma na isiokwu a banyere ọdịnihu ọrụ.
Cheryl na-enye ọtụtụ akụkọ na ndụmọdụ bara uru ma ọ bụrụ na ịgụghị nke a ugbu a, ị na-atụ uche maka ọdịnihu. N'ịbụ onye Gen XI na-enwe mmetụta nke ike na m ga-esite ugbu a maa onwe m aka ka m nwee ọgụgụ isi buru ibu, ihe okike na ndị mmadụ! Ekele Cheryl maka ide akwụkwọ a na ịkekọrịta ụwa maka ọdịnihu anyị ka mma. ”
- Alice Fung, Ahịa Amazon
Ntuziaka mara mma maka otu esi eme atụmatụ ma kwadebe maka ọdịnihu ọrụ
Dị ka onye na-akwụ ụgwọ, achọtara m akwụkwọ NextMapping ka ọ bụrụ ezigbo nduzi na otu esi eme atụmatụ na ịkwadebe maka ọrụ n'ọdịnihu. Achọrọ m ịnọ n'elu usoro na-egosi etu azụmaahịa si arụ ọrụ. Akwụkwọ a baara m uru ma oge ya. ”
- Michelle, Ahịa Amazon
Anya-Imepe Maka Odi Ahia N’ile ahia
“Akwụkwọ a na-arụ ọrụ dị ịtụnanya na-egosipụta n’ọdịnihu ma na-enye usoro dị irè ma nwee atụ, iji kwadebe maka ọnọdụ azụmahịa na-agbanwe agbanwe. Edere ederede na echiche a n'ụzọ doro anya onye na-agụ akwụkwọ azụmahịa dịka m nwere ike ịghọta. Aga m akwado gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịnọ n'ihu usoro ihe ọhụrụ.
- Keran S., Ahịa Amazon
Ike nke teknụzụ na ezigbo mmetụta ọ kpaliri m mmụọ nsọ.
Cheryl nwere ụzọ pụrụ iche na nke na-akpali akpali ịkekọrịta oke na ndị isi na-achị isi nke karịrị ọgụgụ isi ma jikọta ya na mkpali ndị dị n'ime. Ozugbo m gụrụ Isi nke 1 enwere m agụụ na mmụọ nsọ site n'ike nke teknụzụ na mmetụta ya dị mma. Enwere m mmasị na infographics maka isi nke ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe ịhụ recap nke isi nke ọ bụla n'otu ntabi anya - magburu onwe ya! Akwụkwọ a bụ ihe na-akpali akpali maka ọdịnihu na otu ndị isi, ndị otu na ndị ọchụnta ego nwere ike isi mee ka ọdịnihu na-aga nke ọma. ”
- Teresia LaRocque, Ahịa Amazon
Chọghị itinye akwụkwọ a.
“Nachọgharị ọdịnihu nke ndị ọrụ anyị bụ nnọọ nnukwu ihe ịma aka. Nke a bụ ihe dị egwu ma na-enye mmụta. Ana m akwado akwụkwọ a maka onye ọ bụla nke na-achọ itolite ma nwee ọganiihu na gburugburu ha. ”
- Christine, Ahịa Amazon
Mee atụmatụ ọdịnihu gị
“Cheryl Cran's NextMapping na-enye gị nnukwu ozi na ọnọdụ shaping ma nke onwe na nke azụmahịa n'ógbè. Enwere m mmasị n'ụzọ o si abata na abata. Nnukwu ọnọdụ, mmetụta onwe onye. Ana m akwado akwụkwọ a! ”
- Shelle Rose Charvet, Ahịa Amazon
Ọbụna abụghị m onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye nwe azụmaahịa, akwụkwọ a na-atọ m ụtọ nke ukwuu ma ọ na-adọrọ mmasị. Nnukwu ọgụgụ! Ọ na-enye m echiche ọhụrụ na ntụgharị uche na gburugburu azụmaahịa dị nso n'ọdịnihu. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ n'ezie nduzi bara uru yana ezigbo ndụmọdụ maka ndị ọchụnta ego na ndị nwe ụlọ ọrụ. Kwee nnọọ! ”
- Wyatt Sze, Ahịa Amazon
“NextMapping bụ anya na ebe azụmahịa na-aga na ụwa ebe Ai na robotik egwu mgbe amụba ọrụ na azụmahịa. Cheryl Cran na-enye ọhụụ nke ọdịnihu nke na-adịghị n'ebe dị anya. Ọ na-atụle mkpa ọ dị ịnọ n'elu nyocha iji mee ka azụmaahịa gị na-aga n'ọdịnihu na-agaghị efu n'oge gara aga. Writingdị ederede Cran doro anya ma na-adọrọ mmasị. Enwere m obi ụtọ ịgụ akwụkwọ a ma hụ ya dị ka ihe mmụta na ihe na-atọ ụtọ. Edere akwụkwọ ahụ n'ụzọ a haziri ahazi na nke kwere nghọta nke na-eme ka ọ dị mfe ọgụgụ nke ọma yana eserese na eserese gbakwunyere na nke a. Enwere m mmasị na ngalaba gbasara amụma na ịma aka n'ụzọ ị na-eche. Ihe na-adọrọ mmasị ma na-akpali akpali. ”
- Emerson Rose Craig, Onye Ahịa Ahịa Amazon
Ga-agụrịrị maka ndị isi, otu na ndị ọchụnta ego
“NextMapping bụ a ga-agụ maka ndị isi, ìgwè na oru buu igba n’ulo na-adị njikere maka ọdịnihu, Ugbu a! Achọtara m akwụkwọ ahụ nyere m usoro ndị bara uru ma m hụrụ n'anya ụdị PREDICT. Kwadoo !!
- WomenSpeakersAssociation, Amazon Ahịa
Gbaa mbọ hụ na ihe ga-aga n’ihu n’ọdịnihu
“Inwe ike ịnyagharịa ma leverage ọdịnihu nke ọrụ dị oke mkpa maka ọganiihu azụmaahịa ugbu a yana nke ọdịnihu, na NextMapping na-enyere gị aka ịme nke ahụ Iji ihe atụ ndụ dị adị n'ezie, ngwaọrụ, ma na-eduzi akwụkwọ ahụ n'ụzọ doro anya na-emebi usoro ị ga - ewere iji mepụta usoro, ma chịkwaa ọganiihu gị. Nke a abụghị naanị maka igwe mmadụ, AI, data na teknụzụ. Ọ bụ akwụkwọ maka ndị mmadụ, otu, ndị ahịa na azụmaahịa. Dị ka onye na-ere ndụmọdụ, achọtara m mkparịta ụka ahụ na "Ọdịnihu Ekekọrịta Ebube" oke ike. Uche onye oru were gbanwee, uzo ohuru banyere ahia choro nke gha emetuta ndi oru gi na ndi ahia gi. N'agbanyeghị ọnọdụ gị, ahịa ọrụ ma ọ bụ azụmahịa gị, gụọ akwụkwọ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-eto eto n'afọ ole na ole sochirinụ! ”
- Colleen, Amazon Ahịa
Na-akwadebe azụmahịa gị maka ọdịnihu
“Onye edemede nke akwụkwọ a na-ekwusi ike na ụlọ ọrụ achụmnta ego na ndị ọchụnta ego ga-akwadebe ugbu a maka ọdịnihu nke ọrụ ka ọ na-agbanwe n’ihi AI, akpaaka, robotik na oke ọsọ nke mgbanwe. Nke a na-eme ka ezigbo ụda uche: "NextMapping enyere atụgharị n'ọdịnihu visons n'ime ihe ngwọta na actionable atụmatụ maka… anyị ahịa". Companylọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ na NextMapping ga-agbasi mbọ ike site n'ịchọpụta ọdịnihu ma ị nwere ike rite uru na ahụmịhe ha bara uru. Onye edemede ahụ na-elele anya n'ụzọ zuru ezu na mmetụta ndị robotik na-enwe ugbu a n'ọhịa nke ahụike, nrụpụta, ego na ụlọ ahịa. Ọ na-enyocha ụzọ ndụ na nhọrọ ndị mmadụ na-eme taa ịkọ ọdịnihu. Ihe omume na-adọrọ mmasị na ịgụ ọgụgụ dị mma. ”
- M. Hernandez, Ahịa Amazon
Ọgụgụ na-akpali akpali
“Dị ka obere onye nwe ụlọ ọrụ, m mgbe super ụjọ banyere echiche nke Ai, akpaaka na robotik, ma na-eme ihe n’eziokwu, m na-eche na ọ bụ ihe na niile azụmahịa nwe (nke nha) kwesịrị n'ezie ịmụta banyere, inyocha na mara n'ezie banyere etu uru ndị ahụ ga-esi emetụta ebe azụmahịa ha. "NextMapping: Na-atụ anya, vnyagharịa & Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ" n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya mgbari a ga-eme n'ọdịnihu nke ulo oru na a n'ụzọ nke bụ n'ezie-anya na-bụ n'ezie a ga na-agụ maka niile ulo oru, ọbụna ndị na-ekwu na ha agaghị eme tinye ngwaọrụ, AI ma ọ bụ akpaaka na ụlọ ọrụ ha. Akwụkwọ a ga-emecha gbanwee obi gị. ”
- Amy Koller, Ahịa Amazon
Akwụkwọ nke ozi bara ezigbo uru
“Nke a bụ ezigbo mkpụmkpụ ọgụgụ mana ọ jupụtara na ndụmọdụ dị ukwuu na atụmatụ maka ndị ọchụnta ego, ndị nwe ụlọ ọrụ na ndị isi iji kwadebe maka ọdịnihu nke azụmaahịa ma nọrọ n'ihu egwuregwu ahụ iji gaa n'ihu na-aga nke ọma ọbụlagodi mgbe azụmaahịa na-akpaghị aka. Dị ka onye na - akwụ ụgwọ, ọ dị m ka akwụkwọ a ọ ga - enyere m aka ịkwadebe nke ọma ma nọrọ na ụbọchị ụzọ azụmaahịa ga-agbanwe wee na-eto. Dị ka onye na-arụ ọrụ obere ụlọ ọrụ Akwụkwọ a ga-enyere m aka iweta ozi bara uru na tebụl nke ga-enyere ụlọ ọrụ anyị aka itolite yana nyere m aka itolite na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dị m ka onye ọ bụla chere na ọdịnihu nke azụmahịa ha kwesịrị ịgụ akwụkwọ a dabere na ịnọ ugbu a na ịhazi atụmatụ maka ebe azụmahịa nwere ike ịmalite ọzọ! ”
- Shanell, Amazon Ahịa
Ndị robot na-abịa! Ma nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ọjọọ…
“Ọganihu nke igwe ojii na sọftụwia a na-achịkwa AI na-atọ ụtọ n'ọtụtụ ụzọ, mana o nwekwara ụfọdụ nkọwa pụtara na ngwa dị oke mkpa. Ai nwere ike gbanwee usoro anyị bi n'ime afọ iri na iri abụọ na-esote, yana ebe anyị ji akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị na-arụ ọrụ, mgbanwe ndị ahụ nwere ike ịmetụta n'ahịa ọrụ yana gburugburu ọrụ.
Ọ dị mfe ileghara mgbanwe nke teknụzụ anya dịka ihe na-anaghị eme n'ime afọ iri abụọ ọzọ, mana nke bụ eziokwu, ọ na-eme ma na-emetụta ndụ anyị, yana ịrụ ọrụ nke ọtụtụ azụmaahịa. Imirikiti ndị na-ere DVD ahụtụbeghị ka Netflix na-abịa, na Uber abụkwaghị okwu na-atọ ọchị nye ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ niile tufuru akụkụ dị mkpa nke ego ha na-enweta site na ngwa smartphone. Ma ị̀ bụ onye ọchụnta ego ma ọ bụ onye isi otu nnukwu ụlọ ọrụ, ọ dị mkpa ka ị mara mgbanwe ndị AI butere wee hazie atụmatụ gị n'ihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe ịga nke ọma n'ime afọ iri. ”
- Rev. Stephen R. Wilson, onye ahịa Amazon
Akwụkwọ buru ibu!
"Nextmapping" bụ akwụkwọ na-enye azum na echiche banyere otu esi akwadebe ndị mmadụ na azụmaahịa iji gbanwee maka ihu na-agbanwe ngwa ngwa nke ọgụgụ isi, akpaaka, na robotik. A haziri akwụkwọ a nke ọma ma ọ dịrị onye na-agụ ya mfe ịhụ na onye ode akwụkwọ nwere ahụmịhe ma ghọta isiokwu ahụ nke ọma. Onye edemede ahụ na-ewepụta ọtụtụ ihe atụ dị adị na ọmụmụ ihe iji nyere onye na-agụ ya aka ịghọta mkpa ọ dị inwe ike imeghari ngwa ngwa na mgbanwe ngwa ngwa na teknụzụ nke metụtara akụkụ niile nke ndụ anyị. Ihe kachasị m mma gbasara akwụkwọ a bụ AKWEDKWỌ AKW whichKWỌ nke na-enyere onye na-agụ ya aka ịtụ anya ọdịnihu ma kwadebe ya nke ọma. Akwụkwọ a abụghị naanị maka ndị ọchụnta ego na ndị isi ụlọ ọrụ na-eche maka iwulite azụmaahịa nwere ike iguzogide mgbanwe oge. Akwụkwọ a nwekwara ihe mmụta dị ukwuu ma baara onye ọ bụla na-achọghị ịhapụ ebili mmiri nke mgbanwe teknụzụ ume. ”
- Faith Lee, Ahịa Amazon
Maka ndị na-ege ntị ezubere iche na ihe na-atọ ụtọ maka ndị niile na-agụ ya.
“N’ịgbaso ihe ndozi a na-emebu, akwụkwọ ahụ ji okwu banyere onye dere ya, okwu mmalite ya na akụkụ atọ ya meghee. AKW ONEKWỌ NKE MB contains nwere isi 2, Nke mbụ na-akọwa na "Ọdịnihu dị ugbu a" wee jụọ "You Dị Njikere?" n'ihi na nke ugbua malitere ọtụtụ robots, drones, AI na ndị dị iche iche ghọrọ usoro echiche nke ọhụrụ ọrụ bi na nke ị na-aga ga-emekọ. Isi nke Abụọ - “Ọdịnihu, redkọ ọdịnihu - Pzọ Amụma Ahụ” na - akọwa ebe ị ga - ekpebi mgbe na otu ihe ndị a ga - esi metụta azụmahịa gị. AKW TWOKWỌ NKE Abụọ nwere isi 3 na-enyocha “Ọdịnihu nke Ọrụ.” Nke mbụ (Isi nke Atọ) "Mindset of a Navigator of the Future of Work" na-akọwa kpọmkwem ihe nke a ga-abụ. Isi nke Anọ, "Ekekọrịta Ọdịnihu" na-akọwa etu uche nke ndị ọrụ ọhụụ ga-esi dị iche na ndị nke gara aga na-achọ ụzọ ọhụụ ọhụụ. Ise, "Na-agagharị Chama Aka Nke Taa - Gini Na-esote" na-enyocha ihe ndị dị adị na ọdịniihu. AKW PARTKWỌ NKE Atọ nwere isi nke 6 na 7 nke na-akọwa oke ihe achọrọ maka okike nke 'Omenala Ntụkwasị Obi' n'ime ọrụ iji chee ọdịnihu mmadụ ihu na Robots, AI na akpaaka. Isi nke ikpeazụ na-emesi NextMapping ka "Mepụta Ọdịnihu gị nke Ọrụ ma Keekọrịta Ọdịnihu Are Na-eke". Ndepụta nke "Resources" na Index kachasị enyere aka mechie akwụkwọ ahụ.
Mkparịta ụka: Nke a bụ akwụkwọ ọzọ dị ukwuu karịa nke na-egosi iji nyere ndị nwe ụlọ ahịa aka, CEO si, COO's et.al. na ihu mmetụta nke ọtụtụ ihe. Akpaaka enwetawo nlebara anya kachasị ukwuu ruo n'oge n'ihi oke njọ na data nke na-abụrịrị isi nsogbu na-abawanye ụba na ọtụtụ akwụkwọ raara nye mkpa iji gbasaa igwe ojii na ohere nke ịmalite Quantum Computers. Fewfọdụ lekwasịrị anya na njirimara onwe ha na itinye aka na njirimara nke ụdị ọgbọ dị iche iche. Onye edemede a adọtala ọtụtụ n'ime ihe ikpeazụ a, o yikarịrị ka ọ dị nkenke karịa ndị ọzọ m gụrụ, ma kọwaa ọ bụghị naanị ọdịiche dị iche iche nke ndị ọhụrụ na-esite n'aka ndị ha na-edochi na ọrụ ọrụ, mana mmekọrịta ha na ngwa ngwa ebe nke Rọbọt. AI na akpaaka. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ akwụkwọ ndị ndị nkuzi na-edekarị, enwere nkwughachi ọnụ nke enwere ike ileghara anya n'ihi iji ya 'kwuo okwu'. N'ihe niile, onyinye kachasị dị mkpa maka inwekwu ihe ọmụma maka azụmahịa iji lanarị n'ime ụwa a na-agbanwe ngwa ngwa. Nke na-ewetara onye na-agụ ya echiche na-atọ ụtọ. Nlele anya nke onye ọ bụla nọ n'ọkwá ike ga-achọ iji kwado ntụkwasị obi nke akụkụ ọ bụla nke 'otu'. Ka ndị otu ọhụụ na-eme mkpebi, naanị otu onye na-araraghị onwe ya nwere ike iweta nsonaazụ na-achọghị na-echetara ilu ochie - Kamel bụ ịnyịnya nke kọmitii mere. ”
- John H. Manhold, Onye Ahịa Amazon
Akwụkwọ ọhụrụ Cheryl dị mkpa maka onye ọ bụla ọkachamara na-arụ ọrụ nke dị njikere ime ihe ma nabata ọrụ n'ọdịnihu. N'akwado usoro ndị ọhụrụ na data bara uru iji jiri nlezianya nyochaa mgbanwe mgbanwe na-emetụta ọdịnihu nke ọrụ, akwụkwọ a bụ ngwaọrụ bara uru maka onye ọ bụla chọrọ ịmụ etu esi atụ anya, ma nwee ọganiihu nke ọdịnihu.
“Dịka akụkụ nke ọrụ mmadụ dị ka onye isi ala, ị ga-enwerịrị ike iduzi nzukọ gị, n'agbanyeghị ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba, na ịnagide mgbanwe ọsịsọ na mmekọrịta ọha na eze na-aga n'ihu, yana ị nweta ụgwọ ọrụ ya. Akwụkwọ Cheryl na-enye ọmụmụ magburu onwe ya banyere ndị otu ga-eme n'ọdịnihu na-atụ anya, yana ịnye nkà dị mkpa iji zụlite mgbanwe ndị ahụ n'ọdịnihu maka nzukọ gị. "
- Walter Foeman, Onye ode akwukwo obodo, Obodo Coral Gables
Amatala m Cheryl Cran ruo ọtụtụ afọ na ụlọ ọrụ anyị na-eji nyocha ya nyocha nyocha nke ọma ma ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ n'echiche ụbọchị kwa ụbọchị na-elekwasị anya na uto na mgbasa. Site na NextMapping, Cheryl na-enye obodo ndi ọchụnta ego ngwaọrụ iji kwadebe òtù ha maka ụwa ọdịnihu ebe omume na teknụzụ ga-agbagha ụzọ ndị mmadụ na-agaghị eche n'echiche 20 afọ gara aga. "
- John E. Moriarty, Onye guzobere & Onye isi ala, e3 ConsultantsGROUP
“NextMapping bụ a kwesịrị ịgụ maka ndị isi na-arụ ọrụ ọkachamara gafee ụlọ ọrụ. Ka ụwa na-arụ ọrụ na-emewanye ngwa ngwa ma bụrụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa, ndị mmadụ n'otu n'otu na nzukọ dị iche iche ga-adị gara gara gara aga ma na-eme mgbanwe iji dịrị mkpa. Cheryl na-elepụ anya n'ihu maka ọdịnihu nke ọrụ yana usoro na ihe atụ sitere nchọnchọ ma na-enye ndị na-agụ ndụmọdụ bara uru maka iwulite ikike mgbanwe dị oke mkpa.
'' - Liz O'Connor, Onye isi ụlọ akwụkwọ, Daggerwing Group
“NextMapping bụ ume! Ọ bụrụ na ị bụ onye ndu azụmaahịa na-achọ atụmatụ iji mee ka nzukọ gị gaa n'ọkwa ọzọ, akwụkwọ a bụ maka gị. Enwere m ekele maka ịkọwa Cheryl n'ezoghị ọnụ na nyocha ya nke data na-enye ndị na-ege ya ntị ntụkwasị obi. ”
- Josh Hveem, COO, OmniTel Nkwukọrịta
“Cheryl Cran bụ onye na-ekwu okwu na onye edemede na-akpali akpali nke na-akpali ndị isi ka ha hụ ihe ga-eme n’ọdịnihu ma na-akpali ndị isi ka ha mee ihe ịma aka iji mezuo ebumnuche ha. NextMapping na-eji data dị mkpa iji dokwuo anya ma na-enye ndụmọdụ bara uru maka ime ka ọdịnihu bụrụ eziokwu. N'ebe ọrụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe mgbanwe na-aga ngwa ngwa na iwu na-agbanwe, ọhụụ a doro anya na ụzọ maka ọdịnihu nke ọrụ adịbeghị mkpa ugbu a. "
- Suzanne Adnams, VP nyocha, Gartner
“Akwụkwọ a bụ njem nke ọdịnihu nke azụmaahịa na onye ndu. Ọ bụ njikọta mara mma nke amamihe nhazi na onye nzọpụta azụmaahịa nwere nghọta miri emi na nghọta nke ụdị mmadụ na etu usoro ndụ dị mgbagwoju anya si arụ ọrụ. Ihe dị ịtụnanya bụ etu onye edemede si gosipụta otu ihe ọ na-ede na ihe ọ bụ. Kọkọrịta echiche ya banyere otu esi eme ka ọdịbendị na ụlọ ọrụ ga-adị njikere n'ọdịnihu ọ na-egosipụta ọrụ nke onye ndu evolushọn nke akọwapụtara nke ọma ma kọwaa ya nke ọma n'akwụkwọ ahụ. Ihe egwuregwu na-agbanwe egwuregwu nke ga-ewetara onye na-agụ ya nghọta doro anya, mmụọ nsọ na ọchịchọ ime ihe. ”
- Danilo Simoni, Onye guzobere na onye isi nke BLOOM
“Mgbe a bịara n’ihe metụtara ịnyagharị n’ọdịnihu nke ọrụ, Nextmapping bụ laithaus. Ọ na - enyere anyị aka izere ihe mgbochi ndị anyị na - adịghị ahụ anya, ebe anyị na - aga ebe anyị na - arụ ọrụ na - arụpụta ọrụ. Emeghị ihe abụghị nhọrọ dịka mgbanwe na-adị gburugburu anyị niile - ọrụ Cheryl na-enye onye ndu ọ bụla obi ike iji duo ha na ndị ọzọ.
- Christine McLeod, Ndi ndu ubochi nile, Onye ndu na onye ndu
Cheryl Cran na-ekiri peek na Isi nke 1 nke akwụkwọ ọhụrụ ya, "NextMapping- Anticipate, Navigate na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ" ruru na February 2019.
Cheryl Cran na-ekerịta ngwa ngwa na Isi nke 2. Ọ bụ maka otu esi eji mmata ụkpụrụ na ọnọdụ nke omume mmadụ ka mma maapụ ma kwado ọdịnihu gị dịka onye ndu, onye otu, onye ọchụnta ego ma ọ bụ nzukọ.
Na isi 3 ihe a na-elekwasị anya bụ ịnyagharị ọdịnihu na ntụzịaka ọdịnihu na ụba. Ike nke iche echiche banyere ihe dị ugbu a na ọdịnihu imepụta nsonaazụ ọhụụ.
Isi nke 4 na-elekwasị anya n’ọdịniihu na-emekọrịta, na-ekerịta akụnụba na idu ndú na-achịkwa. Millennials na Gen Z chọrọ ịrụ ọrụ na ebe ọrụ na-emeghe ma na-emeghe.
N'isi 5 ihe a na-elekwasị anya bụ ịnya aka ịma aka nke mgbanwe dijitalụ, ịchọta na idobe ezigbo mmadụ, yana otu ụlọ ọrụ si edozi nsogbu ụfọdụ. Ihe ịma aka a chọrọ ngwọta ọhụụ.
Isi nke 6 bụ maka ịmepụta mgbanwe ịchọrọ iji nwee omenala ntụkwasị obi. Mkpa ndị isi mepụta ọdịbendị na-enweghị atụ ebe ìgwè dị iche iche nwere ike iche na ọ nweghị ihe ịga nke ọma, imekọrịta na mgbanwe.
Isiakwụkwọ a lekwasịrị anya n’ọ ọdịnihu mmadụ nke ukwuu n’otu afọ nke robotics, AI, akpaaka na robotics. Ndị ọrụ na-achọkwu mkpụrụ obi na ebe ọrụ mmadụ. Nke a pụtara ilekwasị anya na ahụmịhe onye ahịa na nke onye ọrụ dị ka elekwasị anya kachasị na teknụzụ na-akwado otu anyị si emepụta ahụmịhe mmadụ karịa.
Cheryl Cran na-ekeriri ntụle nke Isi nke 8 nke akwụkwọ ọhụrụ ya, NextMapping- Anụmanụ, Kpegharịa na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ. Ihe niile na - ezukọta gụnyere usoro NextMapping iji nyere ndị isi, ndị otu na otu aka ịdị njikere ugbu a.
Cheryl Cran bụ ọdịnihu #1 nke influencer ọrụ, onye ndụmọdụ zuru ụwa ọnụ ma kpọọ aha ya dịka otu n'ime ndị isi ndị isi oche North America. Ọ bụ onye dere akwụkwọ asaa gụnyere, “Nkà nke mgbanwe ndu - Ngbanwe vinggbanwe awa nke Ọsọ ọsọ”.
Ọ bụ onye a na-achọ ndụmọdụ nke ukwuu na-enyere ndị isi, ìgwè na ndị ọchụnta ego aka ịmebe, nwekwuo ike ma na-ebute ọdịnihu ọrụ na ọsọ nke mgbanwe. A gosiputara ọrụ ya na Washington Post, Huff Post, Metro New York, Magazine Magazine na ndị ọzọ.